खसबहुन र हामी (आदिवासी जनजाति) मा फरक – ABC KHABAR
May 24, 2017 May 24, 2017 ABC Desk बिचार
१) एकै घरका क्षेत्री बाहुन दाजुभाइ दिदीबहिनी किन फरक फरक पार्टीमा लाग्छन् वा परिवार नै राजनीतिमा लाग्छन्रु किनकि उनीहरुलाई राजनीति शक्ति हो भनेर सिकाइएको छ । हाम्रा चि फोहरि खेल रे अनि कसरी पुग्नु त शक्ति केन्द्रमा राजनीति नै नगरि ?
२) उनिहरु मताधिकार प्रयोग गर्न लालायित हुन्छन् । मेरो १ मत पनि अमुल्य छ । मैले चाहेको व्यक्ति, पार्टी जिताउन म आफैं लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी था छ । हाम्रा जुन गोरु आए पनि कान चिरेको न हो भनेर कानमा तेल हालेर बस्छन् । कसले काम गरिदिन्छ ? खानु परेन, छोराछोरी पाल्नु परेन, भन्छन् अनि हामीले मन परेको मान्छे र पार्टी नहारि अरुको पार्टी हार्छ ?
३) उनीहरु चेलाचपेटा बनाउँछन् । हाम्राहरु आफैं पो लाग्नुपर्छ त । बोकेर, घिसारेर हुन्छ र भन्छन् र चाहिँदा एक्लै पर्छन् ।
४) उनीहरु राजनीतिसँगसँगै कुटनीति पनि बुझेका छन् । मित्र शत्रु र महाशत्रु चिन्छन् । समयलाई आफ्नु अनुकुल उपयोग गर्न सक्छन् । हाम्राहरु जुन पार्टीमा लागेको त्यो पार्टी मात्र बुझ्छन् । अनि फरक विचार र आस्थाकालाई गालि गर्न, कुट्न झम्टिन मात्र जान्दछन् ।
५) उनीहरु संघे शक्ति कलियुगे भनेर बुझेका छन् । हाम्रा म एक्लैले ८, ९ जना फाडिदिन्छु भन्ने मात्र जान्दछन् । था छैन ८,९ जना भन्दा बढि आए के हुन्छ ।
६) उनिहरु प्रत्येक व्यक्तिको रुचि अनुसार कुरा गर्छन् । था छ कि मनले नरुचाएको कुरा कसैले पनि जबर्जस्ती ग्रहण गर्दैन । हाम्रा खाए खा नखाए घिच भन्छन् । अर्काको रुचि प्रति चासो नै हुँदैन । अरुको मन दुख्छ भन्ने था नै हुन्न ।
७) उनिहरु सँधै समय मेरो अनुकुल हुँदैन । यसैले कसरी सुरछित रहने र आफ्ना अनुयायीहरुलाई सुरक्षा दिने रणनीति तयारी गरिरहन्छन् । हाम्रा सँधै एकै खाले समय र अबस्थाको कल्पनामा ढुक्का रहन्छन् । कसैको मतलब नै हुँदैन ।
८) उनिहरुलाई कसरी बढीभन्दा बढी माछा जालमा पार्ने भनेर ह‍‍ोमवर्क गर्छन । कागजमा उतार्छन । परमर्शदाता र जान्ने मछुवाको उपयोग गर्छन् । हाम्राहरु जानेको छु भनेर पुरानै माछा मार्ने तरिका अपनाउँछौ । तर माछा बाठा भै सके भन्ने भ्याउसम्म पाउन सक्दैनौं खोला किनार र नदि किनार बसेर । वास्तबमा हामीसँग योजनाहरु नै छैन ।
९) उनीहरुलाई मौकामा हिरा फोर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान छ । समय र परिस्थिति आफ्नो अनुकुल बनाउन जति पनि खर्च गर्छन् । हाम्राहरु त्यसले मेरो लागि त्यति गर्नुपर्दैन । काँ छ मसँग पैसा भन्छन् । अनावश्यक ठाउँ, समय र परिस्थितिमा भने जति पनि खर्च गर्छन् । सम्झायो मेरो सम्पत्तिको मेरो खुशी जेसुकै गरौ भन्छन् ।
अनि अब हामीले आरिस गरेर भो । हामीले सिक्नु र व्यवहारमा उतार्न धेरै कुरा बाँकी छ ।
(Kaatich Ukusu को फेसबुक वालबाट)
Tagged आदिवासी जनजाति
बोटलर्स नेपालको प्रगति विवरणमा बदमासी